ကြားသိသမျှ Archives - Page9of 17 - Khitalin Media
ကိုရီးယားရောက်ကရင်တိုင်းရင်းသူအဆိုတော်မ​လေးရဲ့ “မြန်မာ့နွေဦး” သီချင်းသစ်​လေးစတင်ဖြန့်ချီ (ရုပ်/သံ)
June 13, 2021 by Khitalin Media
ကိုရီးယားရောက်ကရင်တိုင်းရင်းသူအဆိုတော်မ​လေးရဲ့ “မြန်မာ့နွေဦး” သီချင်းသစ်​လေးစတင်ဖြန့်ချီ (ရုပ်/သံ) ရုပ်သံဖိုင်ကိုအောက်ဆုံးမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်… တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကရင်တိုင်းရင်းသူအဆိုတော် နော်မာသာထူးဝါး (Wanyiwah ) မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဝေမျှဖို့ “ မြန်မာ့နွေဦး” သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်ကို သီဆို ဖြန့်ချိထားပါတယ်။ ပန်းပွင့်တွေထဲ တော်လှန်ရေးသင်္ကေတလက်ချောင်း ၃ ချောင်းတွေဖူးပွင့်လာမလားဆိုတဲ့ စာသားပါတဲ့ မြန်မာ့နွေဦးသီချင်းကိုဆိုရင်း မြန်မာနိုင်ငံက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့လတ်တလော ပင်ပန်းခက်ခဲပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နွေဦးရာသီကို ဖြတ်သန်းနေရပြီးမကြာခင်မှာအကြောက်တရားမရှိပျော်ရွှင်စရာနွေဦးရာသီရောက်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ နော်မာသာထူးဝါးက သူ့ခံစားချက်တွေ မျှဝေထားပါတယ်။ နော်မာသာထူးဝါးရဲ့မိဘတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေချိန်တုန်းက တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ အပေါ်ဖိနှိ.ပ်ခံရတဲ့​နေရာက ထွက်ပြေးလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာအခြေချခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖခင်ကွယ်လွန် သွားပြီးနောက်မှာငွေကြေးချို့တဲ့နွမ်းပါးတဲ့ ကလေး ၃ ယောက်မိခင်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသီချင်းဆိုဝါသနာကြီးလှတဲ့နော်မာသာထူးဝါး အတွက်အခွင့်အရေးပိုကောင်းဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ နော်မာသာထူးဝါးဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူကြိုက်များတဲ့ ​တေးဂီတပွဲတခုမှာ ပါဝင်လာပြီးနောက်မှာတစ်နိုင်ငံလုံးကအာရုံစိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူသီဆိုထားတဲ့ “အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်” သီချင်းနဲ့ဟာလည်းယူကျုမှာ ပေါက်သွားခဲ့ပြီး မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေလည်း မြင့်တက်လာကာ … Read more
မိုးဟေကိုနဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းတို့ရဲ့မပီးနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်း ထပ်မံပေါ်လာ
June 12, 2021 by Khitalin Media
သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကိုနဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းတို့၏ အမွေခွဲတမ်းအရှုပ်တော်ပုံ သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို၏ ခင်ပွန်းဟောင်းမှ နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းအား ပြင်ဆင်ရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရန် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင်ကြေညာ သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို၏ ခင်ပွန်းဟောင်းမှ တရားဥပဒေအရ နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်း ဖြစ်နေဆဲ မြေနှင့်နှစ်ထပ်တိုက်အား သရုပ် ဆောင် မိုးဟေကိုမှ ပြင်ဆင်ပြု လုပ်နေသည့်အတွက် ထိုပြင် ဆင်မှုကို ဆက်မပြုလုပ်ရန် ရှေ့နေကတဆင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ကြေညာလိုက်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားမကြီးအမှုအ မှတ် ၁၄/ ၂၀၁၃ တွင် ဦးညီညီထွန်းက ဒေါ်အေးအေးခိုင် (ခ) သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို အပေါ် လင်မယား ကွာရှင်းပေးစေလိုမှု နှင့် နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်း ခွဲပေးစေလိုမှုကို စွဲဆိုခဲ့ရာ(၈.၈. ၂၀၁၃) ရက်တွင် တရားဝင် လင်မယား ကွာရှင်းပြတ်စဲကြောင်း ဒီကရီ … Read more
တရုတ်နိုင်ငံ ဓာတုဗေဒစက်ရုံ မီးလောင်ပေါက်ကွဲ(ရုပ်သံ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဓာတုဗေဒစက်ရုံ မီးလောင်ပေါက်ကွဲ(ရုပ်သံ) တရုတ်နိုင်ငံ ရှီဟီဇီမြို့က cilicon plant ဓာတုဗေဒစက်ရုံ ယမန်နေ့က မတော်တဆ ပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ယင်း cilicon plant ဓာတုဗေဒ အဆိပ်စက်ရုံပေါက်ကွဲမှုမှ ထွက်လာသည့် မီးခိုးလုံးကြီးများသည် မြေပြင်အမြင့် ပေထောင်ချီတက်ခဲ့ပြီး အနီးနားက အဆောက်အဦးအချို့မှာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိကြောင်း ကနဦးသတင်းအရ သိရှိရပါသည်…။ လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု ရှိမရှိ မသိရသေးပါ…။ credit unicode တရုတျနိုငျငံ ဓာတုဗဒေစကျရုံ မီးလောငျပေါကျကှဲ(ရုပျသံ) တရုတျနိုငျငံ ရှီဟီဇီမွို့က cilicon plant ဓာတုဗဒေစကျရုံ ယမနျနကေ့ မတျောတဆ ပွငျးထနျစှာပေါကျကှဲမှု ဖွဈပှားခဲ့ပါသညျ။ ယငျး cilicon plant ဓာတုဗဒေ အဆိပျစကျရုံပေါကျကှဲမှုမှ ထှကျလာသညျ့ မီးခိုးလုံးကွီးမြားသညျ မွပွေငျအမွငျ့ ပထေောငျခြီတကျခဲ့ပွီး အနီးနားက အဆောကျအဦးအခြို့မှာ … Read more
MMA ဖိုက်တာ ဖိုးသော်ရဲ့ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက်အပြည့်အစုံ
MMA ဖိုက်တာ ဖိုးသော်ရဲ့ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက်အပြည့်အစုံ ဘဝကို Zero က နေပြန်လည်စတင်သွားမယ်လို့ MMA ဖိုက်တာ ဖိုးသော်က ပြောပါတယ်။ သူ့ Gym ခန်းမမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်လက်လုပ်မိုင်းစမ်းသပ်ရင်း ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဝန်ခံခဲ့သလို အခြားသော အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ဆောင်တဲ့အခြားသူတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကိုလည်း မနှစ်မြို့ကြောင်း ဖွင့်ဟပါတယ်။ လက်နက်နဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဖွင့်ဟခဲ့သလို ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေဖြစ်ကြောင်း နားလည်ခံစားမိပြီလို့ ဝန်ခံပြောကြားသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မကြာခင် ရုပ်သံနဲ့တကွဖော်ပြပေးပါမယ်။#Neo Politics #ဖိုးသော် #phoethaw #ဖိုးသော်ရဲ့ဝန်ခံချက် Unicode MMA ဖိုကျတာ ဖိုးသျောရဲ့ဖှငျ့ဟ ဝနျခံခကျြအပွညျ့အစုံ ဘဝကို Zero က နပွေနျလညျစတငျသှားမယျလို့ MMA ဖိုကျတာ ဖိုးသျောက ပွောပါတယျ။ သူ့ Gym ခနျးမမှာဖွဈခဲ့တဲ့ ပေါကျကှဲမှုတှကေို … Read more
လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ ပြည်သူတွေ အရမ်းသိချင်နေတဲ့ကိစ္စကို ပြက်လုံးထုတ်ပြီး အားရပါးရပြောချလိုက်တဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ကတော့ တောထဲတောင်ထဲကို ရောက်ရှိနေပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့အဖွဲ့က တောထဲမှာ စစ်ပညာသင်ယူရင်းနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကတစ်ဆင့် မျှဝေပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေကတော့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံစိတ် အပြည့်ရှိကြတဲ့ သူတို့အဖွဲ့ကို ဆက်လက်အားပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့က တောထဲမှာ နေရေးထိုင်ရေး အဆင်မပြေပေမယ့်လည်း လုံးဝအားမလျှော့ဘဲ ဒုက္ခတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူတို့အဖွဲ့က ပြည်သူတွေ အားတက်စေဖို့အတွက် ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ဟားငါးကောင်အဖွဲ့က လူစုံတက်စုံနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို မျှဝေပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ကတော့ မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေ အရမ်းသိချင်နေတဲ့အကြောင်းကို ပြောထားတာ … Read more
မြန်မာပြည်ကိုရေးလိုက်တဲ့ ယုန်လေးရဲ့ စာ တစ်စောင် ပွဲဆူလျက်ရှိ…
အိပ်လို့လည်း မရပါဘူးကွာ ကဲ ဘယ်နေရာက ဘယ်လိုပါပေးရမလဲပြော .အဖြေတော့ လိုတယ် နော် .မှန်ကန်တဲ့ အဖြေဖြစ်ပါစေ . ဆဲနေတာ အဖြေ မဟုတ်ဘူးနော် .မုန်းတီးရေး က အဖြေ မဟုတ်ဘူးနော် အမေစုကို အေးချမ်း ချမ်း ပြန်မြင်ရဖို့ ကအဖြေနော်.အမေစု ကို ကျွန်တော် ယုန်လေး ချစ်ပါတယ် ဆိုတာ ပါးစပ်က အ မြဲ တန်း ပြောပြီးသားနော် . Post တွေ ဘာမှ မဖြတ်ထားဘူး .NLD အောင်ပွဲ ခံနေတဲ့ ၁၁ လပိုင်း ၁၀ ရက်လား ၁၁ လား ၁၂ ရက်လား တစ်ခုခု ပဲ NLD ရုံးရှေ့ အပြန်လမ်းမှာ NLD … Read more
မိုးတွေ သဲကြီးမဲကြီး ရွာနေပေမဲ့လည်း ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ လမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီး
June 7, 2021 by Khitalin Media
မိုးတွေ သဲကြီးမဲကြီး ရွာနေပေမဲ့လည်း ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ လမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းနေခဲ့ရတဲ့အဘိုးအို ပညာကောင်းမွန်စွာမသင်ကြားခဲ့ရဘဲ၊ဝန်ထမ်းအလုပ်တွေတောင်မလုပ်လိုက်ရတဲ့အပြင် ပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးပြင်းလာခဲ့ကြရတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုမကြာခဏတွေ့ဖူး၊မြင်ဖူးကြရမှာပါ။ အချို့ အဘိုးအဘွားတွေဆိုရင်အိုးမင်းရင်ရော်တဲ့အထိပြန်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုမဲ့သားသမီးတွေမရှိလို့နောက်ဆုံးနေ့အထိရုန်းကန်နေကြရတာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကအဘိုးအိုတစ်ဦးဟာမိုးတွေသဲကြီးမဲကြီးရွာပေမဲ့လည်း လုံးဝပင်ပန်းခြင်းမျိုးမရှိဘဲလမ်းဘေးမှာထီးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ထိုင်ပြီးဟင်းသီးဟင်ရွက်တွေရောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ အဘိုးအိုဟာဈေးဦးပေါက်သေးပုံမရသေးဘဲ၊သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာဝင်ငွေနဲ့စားစရိတ်တွေကအဆိုပါရောင်းမထွက်သေးတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုမှီခိုနေရတဲ့ပုံစံလေးပါ။ အဘိုးအိုလိုဖြစ်ရပ်မျိုး ကိုယ်တွေရဲ့နိုင်ငံ၊ ကျေးလက်ရွာလေးတွေမှာနေထိုင်တဲ့အချို့သောအဘိုးအဘွားတွေနဲ့ဆင်တူတွေဘဲမို့ အဘိုးအိုရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လိုက်ရရုံနဲ့ရင်ထဲမှာချက်ချင်းခံစားမိပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်လမ်းပေါ်မိုးထဲလေထဲဈေးရောင်းနေကြတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကိုမြင်ရင်စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ဝယ်ပြီးအားပေးလိုက်ကြဖို့နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်နော်။ Jasmine (Mckzone Daily) Source : elitereaders Unicode မိုးတှေ သဲကွီးမဲကွီး ရှာနပေမေဲ့လညျး ထီးတဈခြောငျးနဲ့ လမျးဘေးမှာထိုငျပွီး ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ရောငျးနခေဲ့ရတဲ့အဘိုးအို ပညာကောငျးမှနျစှာမသငျကွားခဲ့ရဘဲ၊ဝနျထမျးအလုပျတှတေောငျမလုပျလိုကျရတဲ့အပွငျ ပငျပငျပနျးပနျးကွီးပွငျးလာခဲ့ကွရတဲ့သကျကွီးရှယျအိုတှကေိုမကွာခဏတှဖေူ့း၊မွငျဖူးကွရမှာပါ။ အခြို့ အဘိုးအဘှားတှဆေိုရငျအိုးမငျးရငျရျောတဲ့အထိပွနျပွီးကြှေးမှေးပွုစုမဲ့သားသမီးတှမေရှိလို့နောကျဆုံးနအေ့ထိရုနျးကနျနကွေရတာပါ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျးဖိလဈပိုငျနိုငျငံကအဘိုးအိုတဈဦးဟာမိုးတှသေဲကွီးမဲကွီးရှာပမေဲ့လညျး လုံးဝပငျပနျးခွငျးမြိုးမရှိဘဲလမျးဘေးမှာထီးလေးတဈခြောငျးနဲ့ထိုငျပွီးဟငျးသီးဟငျရှကျတှရေောငျးနခေဲ့ပါတယျ။ အဘိုးအိုဟာဈေးဦးပေါကျသေးပုံမရသေးဘဲ၊သူ့ရဲ့တဈနတေ့ာဝငျငှနေဲ့စားစရိတျတှကေအဆိုပါရောငျးမထှကျသေးတဲ့ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေိုမှီခိုနရေတဲ့ပုံစံလေးပါ။ အဘိုးအိုလိုဖွဈရပျမြိုး ကိုယျတှရေဲ့နိုငျငံ၊ ကြေးလကျရှာလေးတှမှောနထေိုငျတဲ့အခြို့သောအဘိုးအဘှားတှနေဲ့ဆငျတူတှဘေဲမို့ အဘိုးအိုရဲ့အဖွဈကိုမွငျလိုကျရရုံနဲ့ရငျထဲမှာခကျြခငျြးခံစားမိပွီးသားပါ။ဒါကွောငျ့လမျးပျေါမိုးထဲလထေဲဈေးရောငျးနကွေတဲ့ အဘိုးအဘှားတှကေိုမွငျရငျစာဖတျသူတှအေနနေဲ့ဝယျပွီးအားပေးလိုကျကွဖို့နှိုးဆျောလိုကျရပါတယျနျော။ Jasmine (Mckzone Daily) Source : elitereaders
နောက် (၃) နာရီအတွင်း မိုးတွေရွာသွန်းနိုင်သည့် ဒေသများ
June 6, 2021 by Khitalin Media
နောက် (၃) နာရီအတွင်း မိုးတွေရွာသွန်းနိုင်သည့် ဒေသများ နောက်(၃)နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းနိုင်သည့်ဒေသများမှာ ချင်းပြည်နယ်တစ်နယ်လုံး ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ် ထို့နောက် ကလေး ခမ်းပတ် တမူး မြို့တို့မှာလည်း မိုးတွေအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်…။ source Su Su San Unicode နောကျ (၃) နာရီအတှငျး မိုးတှရှောသှနျးနိုငျသညျ့ ဒသေမြား နောကျ(၃)နာရီအတှငျး မိုးရှာသှနျးနိုငျသညျ့ဒသေမြားမှာ ခငျြးပွညျနယျတဈနယျလုံး ရှာသှနျးနိုငျပါတယျ ထို့နောကျ ကလေး ခမျးပတျ တမူး မွို့တို့မှာလညျး မိုးတှအေဆကျမပွတျ ရှာသှနျးနိုငျပါတယျ…။ source Su Su San
စိုးရိမ်စရာ တရုတ်နိုင်ငံရေကြီးမှု(ကြောက်ဖို့အရမ်းကောင်းတယ် ရေတွေကနီရဲနေတာပဲ)
စိုးရိမ်စရာ တရုတ်နိုင်ငံရေကြီးမှု သမိုင်းဝင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံက မြစ်ပေါင်း ၉၅ စင်းကျော်မှာ စိုးရိမ်ရေအမှတ် ကျော်လွန်ကာ ဆည်ကျိုးပေါက်မည်ကို လူအများစိုးရိမ်နေကြသည်။ အချို့မှာမြို့လယ်ခေါင်အထိ ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပွားလာနေပြီး အိမ်ခြေပေါင်း ၁၀ သိန်းကျော် နေရပ်မှစွန့်ခွာနေကြရကြောင်း “ရိုက်တာ” သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ယမန်နေ့ကဖော်ပြထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံနာမည်ကျော် Three Gorges Dam ဆည်ကြီးသုံးခု ကျိုးပေါက်ခဲ့လျှင် လူသန်းပေါင်း ၄၀၀ ရေအောက်ရောက်မည်ဟုဆိုကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို ဖြစ်လာခဲ့ပါက လူ့သမိုင်းတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးသော ရေဘေးကပ်ဆိုးကြီး တစ်ခုဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ Unicode စိုးရိမျစရာ တရုတျနိုငျငံရကွေီးမှု သမိုငျးဝငျ မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးမှုကွောငျ့ တရုတျနိုငျငံက မွဈပေါငျး ၉၅ စငျးကြျောမှာ စိုးရိမျရအေမှတျ ကြျောလှနျကာ ဆညျကြိုးပေါကျမညျကို လူအမြားစိုးရိမျနကွေသညျ။ အခြို့မှာမွို့လယျခေါငျအထိ ရလှေမျးမိုးမှုမြားဖွဈပှားလာနပွေီး အိမျခွပေေါငျး … Read more